यौनशक्ति बढाउन सर्पको मासु ! - Safalnews
सफल न्युज द्वारा २०७७ कार्तिक १० गते सोमबार १३:३० मा प्रकाशित
एजेन्सी । के तपाईंले कहिले सर्पको मासु चाख्नुभएको छ ? सर्पको मदिराको एकदुई घुट्की नि ? नेपालीहरु धेरैले ‘छैन’ नै भन्नुहुन्छ होला ।
तर भियतनाममा भने सर्पको मासु खाने चलन छ । सर्प खाने आँट भएका मानिसहरुलाई भियतनाम गज्जबको स्थान हुनसक्छ ।